UKUPHUMA OKUPHAKATHI NOKUBHALISA | I-FXCC
Ukubaluleka kokuhlaziywa emakethe ye-Forex
Ukuhlaziywa kwezimakethe ze-Forex kuza ngezindlela ezimbili ezihlukene; ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe nokuyisisekelo. Izingxoxo ziye zahlasela kusukela ekuzalweni kokuhweba ukuthi yikuphi ukuhlaziywa okungcono kakhulu, noma ngabe abahwebi kufanele basebenzise inhlanganisela yazo zombili izigwegwe, ukuze benze izinqumo ezengeziwe zokuhweba ezinolwazi. Ukucubungula kokubili ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe nokuyisisekelo kuphikisana nalokho okuthiwa yi-"hypothetical-market hypothesis", okusho ukuthi amanani emakethe ayinakulinganiswa.
Ngenkathi izingxoxo sezilokhu ziqhubeka amashumi eminyaka ngokuthi yikuphi ukuhlaziywa okungcono kakhulu, inkinga eyodwa bonke ochwepheshe bezokuhweba nabahlaziyi bayavuma ukuthi lezi zombili izinhlobo zinamagugu futhi zizuzwa ezingasiza abathengisi. Abahlaziyi bayavuma futhi ukuthi kungathatha isikhathi sokuphila konke nokusebenza ukuba ube ngumfundi kunoma yikuphi, noma kokubili izinhlobo zokuhlaziywa. Ukusetshenziswa kokuhlaziywa kobuciko bekubuyiselwe kuma-1700 nabathengisi nabadayisi bamaDashi, ngenkathi ukuhlaziywa kwamakhandlela kuthiwa kwaqala e-China ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye, kuhlonipha indlela eyenziwe ngu-Homma Munehisa, ukucacisa ukufunwa kwempahla eyisisekelo efana nelayisi.
Abahlaziyi abaningi abayisisekelo bayokwenqaba ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe, okuphakamisa ukuthi iningi lezinkomba zezobuchwepheshe ngeke likwazi futhi lingasebenzi, ngoba izinkomba "zizigcwalisa ngokuzimela". Bangase bangabaze ukuthi ama-indicators ajwayelekile kakhulu asetshenzisiwe njengama: MACD, RSI, stochastics, DMI, PSAR (stop stop and reverse), ama-bollinger bands njll. Nokho, kunabathengisi abaningi abaqashile ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe ohlelweni lwabo lokuhweba , ngubani ozobeka ngokucacile ukuthi ukusebenzisa izinkomba, ukungena nokuphuma kwezohwebo, empeleni usebenza. Akusiyo njalo, kepha ngokusho kokungenzeka kanye nokusebenza okujwayelekile, ukuhlaziywa kwabo kwezobuchwepheshe kusebenza kahle ngokwedlulele isikhathi ukuqinisekisa ukuthi bahlakulele uhlelo lokuhweba olunokwethenjelwa namasu, "inqenqemeni" njengoba abathengisi bevame ukubhekisela kuyo.
Kodwa-ke, kuyaphawuleka ukuthi cishe bonke abahlaziyi-abahwebi abayisisekelo bazobe besasebenzisa izindlela zokuhlaziywa kwezobuchwepheshe, ngisho nasesitatimendeni samahhala se-vanilla, esingafani. Kungenzeka ukuthi banqume ukuthi iyiphi indlela yokubonisa amanani ayithandayo: isibani, isibani, i-Heikin-Ashi, umugqa, i-pin-bars, njll Noma bazosebenzisa isu eliyisisekelo lokuhweba kufaka phakathi: ama-lows aphezulu, ama-highs, ahamba ngamanzi, ikhanda namahlombe 'amaphethini, ama-fractals, ama-pivot amaphuzu, ukuhoxiswa kwe-Fibonacci nokudweba imigqa yemidwebo njll. Uma ezinye zezimfomula zifakwa eshadini, ishadi lingabonakala limatasa njengeshadi eliqukethe izinkomba eziningi ezibalulwe ngenhla. Futhi akuzona izibalo mayelana nokuthi ungabeka kuphi futhi uthathe ama-oda omkhawulo we-proft nawo amafomu wokuhlaziywa kobuchwepheshe?
Ngakho-ke ngisho nabahlaziyi bokuhlaziywa okuyisisekelo abazinikezele kumele basebenzise ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe, bazobe bekhetha ukugxila ezindabeni, imicimbi kanye nokukhishwa kwedatha ukwenza, noma ukuveza izinqumo zabo. Futhi ngeke bahambisane nakho konke okukhishwayo, mhlawumbe ngokusebenzisa i-Twitter, noma ukukhokha izindleko ezengeziwe zokusebenzisa lokho okubizwa ngokuthi "i-squawk", ngomzamo wokuba ngaphezulu kwezimakethe nezinqumo zabo zokuhweba.
Kodwa-ke, lesi sigaba sesayithi lethu asikho ukuxoxa ngokulingana okuhambisana nokuhlaziywa okuyisisekelo kanye nobuchwepheshe, sakha isikole samaFX esizokwenza ngaso isikhathi eside, sizobe sinikeze ngokubukezwa okufingqiwe kwezingqikithi ezibalulekile phakathi izindawo ezihlukene zokuhlaziywa.
Iyini i-Forex Technical Analysis?
Ukuhlaziywa kobuchwepheshe (okuvame ukubizwa ngokuthi yi-TA) ukubikezela kokuhamba kwentengo yamanani ezayo ngokususelwa ekuhloleni ukuhamba kwamanani adlule. Ukuhlaziywa kobuchwepheshe kungasiza abahwebi ukuba balindele ukuthi kungenzeka ukuthi kwenzekani ezintweni ngokuhamba kwesikhathi. Ukuhlaziywa kobuchwepheshe kusebenzisa izinkomba ezihlukahlukene kanye namashadi abonisa ukunyakaza kwamanani esikhathini esikhethiwe. Ngokuhlaziya izibalo eziqoqwe kusuka emsebenzini wokuhweba, njengokuhamba kwentengo nomthamo, abathengisi banethemba lokwenza isinqumo mayelana nokuthi iyiphi intengo engayithatha.
Ukuhlaziywa okuningi kwezobuchwepheshe-abadayisi abakhathaleli kancane izindaba. Benza umbono wokuthi ekugcineni imininingwane kanye nomdlandla wezokukhululwa kwezindaba zezomnotho, ekugcineni uzoziveza eshadini. Ngempela, intengo eshadini ingasabela ngaphambi kokuba abadayisi babone idatha ededelwe, noma babe nethuba lokufunda izindaba bese benza isinqumo esinolwazi. Lokhu kungaba njengomphumela wabadayisi be-algorithmic / high frequency abakwazi ukuhamba phambili begijima ngezindaba ngesivinini sombani phambi kwabadayisi abaningi abafayo abangasabela.
Iyini Ukuhlaziywa Okuyisisekelo Forex?
Abahlaziyi abalulekile bahlola ukubaluleka okubalulekile kokutshalwa kwezimali, ngokuphambili lokhu kudinga ukuhlolwa okude kwemibandela yezomnotho ebheka ukulinganisa imali yesizwe. Kunezici eziningi eziyinhloko ezibalulekile ezidlala indima ekunyakeni kwemali, eziningi zazo eziqukethwe kulokho okubizwa ngokuthi "izinkomba zomnotho".
Izinkomba zomnotho kukhona imibiko kanye nedatha ekhishwe uhulumeni wezwe, noma inkampani yangasese njengoMarkit, echaza ukusebenza komnotho wezwe. Imibiko yezomnotho yiyona ndlela ezokulinganiswa ngayo impilo yezomnotho ezweni. Ukukhishwa ngezikhathi ezihleliwe idatha inikeza imakethe ngencazelo yesimo sezomnotho sesizwe; ingabe yenze ngcono noma yenqatshwa? Ku-FX ukuhweba, noma yikuphi ukuphambuka kusuka kumaphakathi, idatha yangaphambilini, noma kulokho okubikezelwe, kungabangela intengo enkulu nokunyakaza kwevolumu.
Nazi imibiko emine emikhulu engakwazi (ekukhululweni) intengo yemali ephelele
I-GDP iyinani elikhulu kunawo wonke lomnotho wezwe; inani lemakethe eliphelele lazo zonke izimpahla kanye nezinsizakalo ezikhiqizwa ezweni ngenkathi ehlaselwe. I-GDP igxilile, ngakho-ke abathengisi bavame ukugxila emibhalweni emibili ekhishwe ngaphambi kokuthi i-GDP efakiwe; umbiko othuthukile kanye nombiko wokuqala. Ukubukwa phakathi kwale mibiko kungabangela ukungazitholi okukhulu.
Imibiko yokuthengisa yokuThengisa 'ikala amaresidi azo zonke izitolo zokuthengisa ezweni elithile. Umbiko uwuphawu oluwusizo lwawo wonke amaphethini wokusebenzisa abathengi, okulungiselelwe iziguquguquko zonyaka. Ingasetshenziselwa ukubikezela ukusebenza kwezinkomba ezibaluleke kakhulu zokubamba futhi ukuhlola isiqondiso esisheshayo somnotho.
Izinguquko ekukhiqizeni: amafemu, amaminerali kanye nezinsiza ezikhona emnothweni wesizwe angabonisa impilo yonke yomnotho. Liphinde libike amandla abo; izinga lapho umshini ngamunye noma amandla asetshenziswayo asetshenziselwa khona. Isizwe esifanele sibheke ukwanda kwezokukhiqiza, kuyilapho siseduze nomthamo wayo.
Abathengi abasebenzisa le datha bavame ukuqapha ukukhiqizwa kosizo, okungahle kube yinkinga yokufuna amandla, kuthintwa izinguquko zezulu. Ukubuyekezwa okuphawulekayo phakathi kwemibiko kungabangelwa izinguquko zesimo sezulu, okungabangela ukungahambisani nemali kazwelonke.
I-CPI inquma ukuguqulwa kwamanani emali emanani entengo yabathengi cishe. imikhakha engamakhulu amabili ehlukene. Lo mbiko ungasetshenziselwa ukubona ukuthi izwe lenza noma lilahlekelwa imali kwimikhiqizo namasevisi ayo. Kungasetshenziselwa ukucacisa ukuthi noma ibhange eliphakathi noma uhulumeni ngeke liphakamise noma linciphise amazinga ezithakazelo ezisezingeni eliphansi, noma lipholile noma livuse umnotho.